चितवन मेडिकलको हब भन्नेकुरा अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छः डा न्यौपाने - Narayanionline.com
डा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने चितवनको मेडिकल क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो । चितवन मेडिकल कलेजको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक न्यौपानेसँग नारायणी अनलाइनले चितवनमा भइरहेको कोरोनाको उपचारबारे भिडियो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ : कुराकानीको सम्पादित अंश अनुच्छेदमा ।
बिरामी हुँदा घरमा नबस्दिनुहोला । किनभने अर्काे एउटा कोरोनाको सानो मिसइन्फरमेसन जस्तो पनि गयो । कोभिड लाग्यो अस्पताल किन जाने भन्दा अहिले कस्तो भयो भने गम्भीर बिरामी हुँदा पनि घरमा बस्यो । अस्पताल आएर छातीमा पूरै सीटीस्क्यान गर्दा खेरी सबै चेस्ट सेतै हुने, भनौं न एकदमै खराब भइसकेको स्थिति छ । अक्सिजन हे¥यो धेरैजसोको ७०–६० छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरु घर बसिरहेका छन् । त्यसकारण घर बस्ने भन्दैमा एकदमै गाह्रो हुँदा पनि घर नबस्नोस् अस्पतालमा हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति छ । प्रशस्त प्रविधि छ । हामी तपाइँहरुलाई सुविधा दिनलाई अहिलेसम्म सक्षम छौं ।
कोरोनाको उपचारमा पहिले भन्दा अहिले निकै सिरियस बिरामीहरु आएका छन् । मोडरेड र सिरियस बिरामी मात्रै आएका छन् । हाम्रोमा चाही बिरामी आउने बित्तिकै अलग अलग ढोकाहरु छन् । प्रवेश गर्ने बाटो फरक छ । पहिले कोभिड ट्रायल गराउँछौं । सुरुमा अक्सिजन लगाउँछौं । ती बिरामीलाई आईसीयूमा पठाउँने कि एचडीयूमा पठाउने निर्णय गर्छौ । हामीसँगै फरक फरक आईसीयू छन् । भेन्टिलेटर चाहिनेमा पठाउने कि कता पठाउने त्यो निर्णय गरेर ट्रायल गरेर हामी तत्कालै भर्ना गर्छौं । हामीसँग क्रिटिकल केयर टिम छ । हामीसँग अहिले फिजिसियनहरु आठ जना छन् । त्यस्तै एनेथेसियालाई पनि हामीले त्यही टिममा राखेका छौं । त्यो सबै गर्दा हामीसँग २० जना जति क्रिटिकल केयर फिजिसियनहरु हुनुहुन्छ ।
सातवटा आईसीयूमा लगेर उपचार गरिरहेका छौं । हाम्रो बेड संख्या जम्मा ७५० बेड हो । त्यसमध्ये पहिले पनि हामीसँग १५० आईसीयू बेडहरु पहिले चलिराखेको नै थियो भने अहिले थपेर १६२ वटा आईसीयू हामीले कोभिडको लागि छुट्याएका छौं । ननकोभिडको लागि अर्काे ३० ओटा बेडको आईसीयू बेग्लै छ । हामीसँग अक्सिजन पोर्टको मात्र कुरा गर्ने हो भने ३७५ वटा अक्सिजन पोर्टहरु छन् । अन्तिम स्थितिमा अक्सिजन दिन पर्ने बिरामी ३७५ जना भर्ना गर्न सक्छौं र १६२ जना क्रिटिकल केयरका बिरामीहरु भर्ना गर्न सक्छौं । हामीसँगै भेन्टिलेटर झण्डै झण्डै ९० वटा भेन्टिलेटर छन् । अहिले हामीले ४८ वटा भेन्टिलेटर कोभिडको लागि प्रयोग गरिहेका छौं ।
मेरो जानकारीमा यति धेरै भेन्टिलेटर र आईसीयू भएको अस्पताल अन्त छैन जस्तो लाग्छ मलाई । अहिलेसम्म मलाई लाग्छ १६ जना बिरामी बाहिरबाट आइसकेका छन् । काठमाडौँबाट, धनगढीबाट, गुल्मीबाट, वाग्लुङबाट र डोटीबाट गरेर त्यसमध्ये हामीले उपचार गरेकामा कतिको राम्रो छ भने कतिको नराम्रो छ । जति पनि हेलिकप्टर चढेर आउने बिरामी सिरियस नै बिरामी हुन्छन् । सिरियस बिरामी सबैलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने छैन । धेरै जसोलाई हाम्रो उपचार राम्रोसँग भइरहेको छ ।
चितवन मेडिकलको हब हुनुपर्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखिनै भन्दै आएका थियौं । त्यसको लागि पनि हेर्ने हो भने ठूला मेडिकल कलेज दुईवटा छन् यहाँ । जसमा ७५०–७५० बेड हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्यस्तै भरतपुर अस्पताल त्यत्तिकै ठूलो क्षेत्रीयस्तरको अस्पताल छ । क्यान्सर अस्पतालले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा पाइसकेको छ । यी चारवटा अस्पताल सहित त्यत्तिकै निजी अस्पतालहरु पनि छन् । त्यसकारण मुख्य चाहिने भनेको प्रविधि हो । आईसीयू चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो, अक्सिजन पाइप चाहियो, अक्सिजन प्लान्ट चाहियो । त्यो सबै हामीसँग पर्याप्त छ । अर्काे भनेको डाक्टरहरु हो । क्रिटिकल केयरको डाक्टरहरु, प्राविधिकहरु हामीसँग पर्याप्त हुनुहुन्छ । अघिनै मैले भने हामीसँग २० जना डाक्टरहरु क्रिटिकल केयरका डाक्टरहरुले बिरामी हेरिरहेका छन् । त्यो लेभलको उपचार हामीले दिन सकेका छौं ।
अर्काे त्यस्तै पुरानो मेडिकल कलेजमा होला, क्यान्सर अस्पताल भनौं अन्य निजी अस्पतालमा पनि छन् । तपाइँले हेर्नु भयो भने यहाँ १४ वटा प्राइभेट अस्पतालहरु छन् । तिनीहरुले निकै राम्रो स्तरीय विशेषज्ञ सेवा दिएर बसिरहेका छन् । यिनै कारणले गर्दा चितवनमा अन्य क्षेत्रहरु भन्दा सक्षम भएका छौं एउटा अर्काेचाही बेडको समस्या भएन, अक्सिजनको समस्या भएन । किनभने हाम्रो यहीको स्थानीय अक्सिजन प्लान्ट जुन छ । हामीसँग आफ्नै प्लान्ट छ तर पर्याप्त छैन । क्यान्सरको आफ्नै प्लान्ट छ र भरतपुर अस्पतालको आफ्नै प्लान्ट छ । अर्काे एउटा बाहिरको प्लान्टले पनि हामीलाई ३५० वटादेखि ४००सम्म सिलिण्डर हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले यस्तो खालको सपोर्ट चितवनमा भएको हुनाले हामी अहिलेसम्म बिरामीलाई यसरी उपचार गर्न सक्षम भएका छौं ।
चितवनमा कस्तो छ भने अहिले तीनवटा अस्पताल मुख्यरुपमा चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल र पुरानो मेडिकल कलेज यी तीनवटा अस्पतालले कोभिडको उपचार गरिराखेका छौं । ल अहिले भर्खर क्यान्सर अस्पतालले पनि सुरु गरेको छ । अन्य प्राइभेट अस्पतालले चाहेको अवस्थामा सेवा सुविधा दिइरहेका छन् । अहिले कोभिड भएको बिरामी र कोभिड नभएको बिरामी दुवै हामीले अलग प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेर कोभिड र ननकोभिडलाई छुन नदिएर, मिक्स हुन नदिएर व्यवस्थित ढंगबाट उपचार गरिरहेका छौं । त्यसकारण म सम्पूर्ण बिरामीलाई गाहे भयो भने कहिले पनि असजिलो नमानिकन बिरामी हुँदा घरमा नबसिदिनु होला । अस्पताल आइदिनु होला । अर्काे कोभिडको कारणले गलत सूचना जस्तो पनि गएको छ मानिसहरुलाई म त्यो पनि भन्न चाहन्छु । सबैजना घरमा नबसी अस्पताल आइदिनु होला ।
अक्सिजन अभावको कुरा के हो भने अरु बेलामा पनि हामीसँग २०० सिलिण्डर प्रत्येक दिनको क्षमता थियो । हामीलाई त्यसले पुगेको थियो । अरुबेलामा पनि हामीले १५० आईसीयू चलाउँथ्यौं कोभिड र ननकोभिड गरेर । त्यतिबेला ४ लिटर, पाँच लिटर, ६ लिटर दिएर अक्सिजन पुग्थ्यो भने अहिले हाईफ्लोमा चलाउँछौं । जसले एकैपटकमा १५ लिटर अक्सिजन दिनुपर्छ प्रति मिनेट । अहिले तीन गुना, चार गुना, पाँच गुनासम्म हामीले अक्सिजनको उपभोग गर्नुपर्ने भयो । आजको दिनमा हामीले २५० जना बिरामी राख्दा २५० जना नै बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ । उनीहरुलाई हाइफ्लो चाहिएको छ । जसअनुसार अहिले दिनमा ६०० वटा सिलिण्डर अक्सिजन हामीलाई चाहिएको छ ।
3 प्रतिक्रिया on “चितवन मेडिकलको हब भन्नेकुरा अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छः डा न्यौपाने”
Dol Nath tripathi says:
Ma chitwan basi Hu work ko silsila ma kailali ma thinya corona test samma Huna NASAkera chitwan aawpuge
Facility ra upchar ta hunx maile mane but covid ko nam ma katai ghar jagga Jane ta hoena vanne jan gunaso x , yo kura prasat pardinus plz.
हरि के सि says:
Desh ko lagi gaurab ko kura , हामी बिकास भनेर बाटाे पिच र बिजुली भन्दै हिड्ने वास्तविक बिकास वनेको शिक्षा र स्वास्थे मा हुनुपर्नी रहेछ बल्ल चेतना भयो ।
भरतपुर महानगरलाई किन टेर्दैनन् स्थानीय ? फोहोर फाल्न चारैतिर अवरोध, ठिमुरामा पनि विरोध
दैलेखमा कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ७ पुग्यो
सुनको मूल्य बढ्यो, तोलामा के कतिले कारोबार भई रहेको छ त ?